Saturday April 04, 2020 - 11:44:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Fal naxdin leh ayaa lagasoo sheegayaa degmada Afgooye ee dhacda duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
sawir hore ciidamo dowladda katirsan oo Afgooye ku sugan
Rag hubaysan ayaa afduubtay ilma yar oo kamid ahaa dadka deegaanka, laba gabdhood oo kala ahaa Afar Jir iyo sedax jir ayaa la sheegay in laqafaashay kadibna isla gudaha degmada Afgooye loogu geystay fal naxdin leh.
Aabaha iyo hooyada dhalay carruurta lafara xumeeyay ayaa warbaahinta u sheegay in labada gabdhood oo aad uyaryar lagu xadgudbay kadibna iyagoo xaalad adag ku sugan lasoo dhigay mid kamida waddooyinka Afgooye.
Dr.Max'med Yuusuf oo ah agaasimaha Isbitaalka Madiina oo lageeyay carruurta ladhibaateeyay ayaa sheegay in xaalad adag ay ku suganyihiin labada canug ee lakufsaday isagoo dhacdadan ku sifeeyay mid bahalnimo oo aan la aqbali karin wuxuuna ku baaqay in lasoo qabto dhagar qabayaashii dhibka geystay.
Waalidiinta dhalay gabdhahan yaryar ee ladhibaateeyay ayaa codsaday in si degdeg ah gacanta loogusoo dhigo dambiilayaashii xadgudubkan ugeystay carruurta.
illaa iyo hadda si rasmi ah looma oga cidda mas'uulka ka ah kufsigan balse waxay dadku farta kuwada taagayaan maleeshiyaadka dowladda Federaalka oo caan ku ah in ay kufsadaan dumarka muslimaadka ah, arrintan oo kale ayaa naadir ka ah soomaalida dhaxdeeda in ilma yar sidaan loo galo.
Degmooyinka iyo deegaannada kujira gacanta ciidamada shisheeye iyo dowladda Federaalka waxaa ka dhaca falal dambiyeedyo fool xun oo ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka.